बिहे गर्न सरकारी जागिरे केटा नै चाहिने! – Sidha Post 24
केटा राम्रो छ नि! अधिकृत छ, त्यो पनि सरकारी। जिन्दगी नै धन्न हुनी हो पछिपछि त। फलाना हाकिमकी बुढी भन्लान् सबले। समाजमा इज्जत पनि प्रसस्तै पाइन्छ। नातागोतामा पनि कसैको छैन हाकिम ज्वाइँ। रवाफै छुट्टै हुन्छ। जिन्दगी सप्रिन्छ। उमेर छँदै गर्नुपर्छ बिहे भन्ने चिज।’ आदि इत्यादिजस्ता कारण देखाइ कन्भिन्स गरिन्छ हाम्रो समाजमा बिहेका लागि।
हजुरआमा! म बिहेपछि श्रीमती मात्रै हैन, जीवनसाथी बन्न चाहन्छु। सेताेपाटीबाट